Ifayibha yeglasi luhlobo lwezinto ezingaphili zentsimbi ezisebenza ngokugqwesa. Ineentlobo ezininzi zeenzuzo, ezinjengokugquma okuhle, ukumelana nobushushu obomeleleyo, ukumelana nokulungela ukubola kunye namandla aphezulu oomatshini, kodwa ukungalunganga kwayo kukunganyangeki okungaginyisi mathe. Ifayibha yeglasi ihlala isetyenziswa njengezinto zokuqinisa kwizinto ezidibeneyo, izinto zokufakelwa kombane kunye nezinto zokufudumeza ubushushu, ibhodi yesekethe kunye nezinye iinkalo zoqoqosho lwesizwe. Ukusebenza: Yandisa ...
Ifayibha yeglasi luhlobo lwezinto ezingaphili zentsimbi ezisebenza ngokugqwesa. Ineentlobo ezininzi zeenzuzo, ezinjengokugquma okuhle, ukumelana nobushushu obomeleleyo, ukumelana nokulungela ukubola kunye namandla aphezulu oomatshini, kodwa ukungalunganga kwayo kukunganyangeki okungaginyisi mathe. Ifayibha yeglasi ihlala isetyenziswa njengezinto zokuqinisa kwizinto ezidibeneyo, izinto zokufakelwa kombane kunye nezinto zokufudumeza ubushushu, ibhodi yesekethe kunye nezinye iinkalo zoqoqosho lwesizwe.
Ifayibha ephezulu yesilika yelitye enqabileyo luhlobo lobushushu obuphezulu obumelana nefayibha. Umxholo wayo wesilica ungaphezulu kwe-96%, kwaye indawo yayo yokuthambisa ikufutshane ne-1700 ℃. Ingasetyenziswa kuma-900 ℃ ixesha elide. Ingasebenza ngo-1450 ℃ kangangemizuzu eli-10, kwaye i-worktable isenokuba kwimeko entle ngo-1600 ℃ kangangemizuzwana eli-15.
I-Vermiculite igutyungelwe kwilaphu le-fiber ngokulinganayo, kwaye ifilimu ekhuselayo yenziwa kumphezulu weglasi yefayibha yelaphu, eyenza ubushushu obusebenzayo bonyuke bube ngama-800 ℃. Kwangelo xesha, ilaphu leglasi yefayibha inokuqina komlilo kunye nokusebenza kokuqhekeka kunye nokuxhathisa ukungqubana, kunye nokusebenza komatshini kulungile.
Ingubo yokufaka umbane yokufaka umbane ubukhulu becala yenziwe ngefayibha engatshiyo kwaye icutshungulwe yinkqubo ekhethekileyo. Iimpawu eziphambili: ezingatshiyo, ubushushu obuphezulu obunganyangekiyo (550 ~ 1100 compact), ubumbano lwendawo, akukho ukucaphuka, ukuthamba nobunzima, kulula ukusonga izinto zomhlaba ezingalinganiyo kunye nezixhobo.